XMPP: ပွင့်လင်းပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး | Linux မှ
Babel | | ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
စာတိုပေးပို့ရေးလုံခြုံရေးနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူမကြာသေးမီကဖောင်းပွမှုများစွာရှိခဲ့သည် Whatsappဒီ client သည်စီးပွားဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအတိအကျအလုံခြုံဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။
ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီးအလွန်အားကောင်းသောတစ်ခုရှိသော်လည်း ကွေးနနျးစာ ၎င်း၏လုံခြုံရေးနှင့်၎င်းသည် open source ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆက်သွယ်ရေးဖြစ်စေသည့်ပွင့်လင်း။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ရွေးချယ်စရာများကိုသုံးမည့်အစားအခြားရွေးချယ်စရာအစီအစဉ်များကိုရှာဖွေရန်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်ကိုမေးမြန်းသင့်သည်။
အချို့သူများခန့်မှန်းနေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် protocol အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည် XMPP။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေခဲ့ပြီးဆက်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေသော်လည်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဒီပရိုတိုကောကိုသုံးသူမည်သူမဆိုမည်သည့်စနစ်နှင့်မဆိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် server နှင့်မဆိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤ protocol ကိုအသုံးပြုရန်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသောမည်သည့်ဆာဗာတွင်မဆိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာဤ site ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ https://xmpp.net/list.php နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်သင်နှင့်အနီးဆုံးဆုံးကိုသုံးပါ (အကွာအဝေးသည်ဆာဗာ၏တုန့်ပြန်မှုမြန်နှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသတိရပါ) ။
သူတို့ရွေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆာဗာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်“ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှု” ပြုလုပ်ရန်ဝက်ဘ်အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုမရှိသည်မှာဖော်ပြသင့်သည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဤရွေးချယ်မှုကိုထောက်ပံ့သောပရိုဂရမ်မှတဆင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Pidgin တွင်သင် configure လုပ်နိုင်သည် XMPP ပြီးတော့ "ဆာဗာတွင်ဤအကောင့်အသစ်ကိုဖန်တီးရန်" (အခြားပရိုဂရမ်များတွင်အလားတူတစ်ခုခုရှိရမည်) ကိုရွေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ connection parameters များကိုမသိချင်ဘူး (ဆာဗာတစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်) နှင့် protocol ကိုသာအသုံးပြုလိုပါက၊ https://mijabber.es/jappix/.
ဤဆာဗာတွင် web interface တစ်ခုရှိသည် (ထို့အပြင်အလွန်သပ်ရပ်စွာ) ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ဘရောက်ဇာမှ chat ကိုပင်အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ interface မရှိသောအခြားဆာဗာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ protocol ကိုအသုံးပြုတဲ့သူမည်သူမဆိုကိုသူတို့ @ ပြီးနောက်အပြီးဘာပဲပြောပြော add ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
XMPP သည်ပွင့်လင်းသောပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည် ဖြစ်၍ ၎င်းသည်တည်ရှိနေသောဖောက်သည်အမျိုးမျိုးကြောင့်မည်သည့် operating system တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါဥပမာအားဖြင့်အတွက်အသုံးပြုသည် pidgin ကို ငါသုံးတဲ့အခါ GNU / Linux များ o Windows ကို; အဒီယမ် အတွက် MacOS; နှင့် ChatSecure Android အတွက် (သူတို့လိုချင်တဲ့ system တွေအတွက်နောက်ထပ်ထောင်ဂဏန်းလောက်ရှိမယ်၊ ဒါကစပြီးရှာဖွေရတာပဲ)
ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်ပုံရသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆာဗာတစ်ခုတည်းရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးလက်ရှိအစိုးရများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြိုးပမ်းနေသောဆက်သွယ်ရေးများကိုအကြီးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ NSA ကရေခဲစိုင်ရဲ့အစပဲ) ။
သတင်းအချက်အလက်သည်စွမ်းအားဖြစ်ပြီး Google, Microsoft, Facebook စသည့်အစွမ်းထက်သောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့်သတင်းအရင်းအမြစ်ဘယ်လောက်ပဲရှိပါစေသတင်းအချက်အလက်အလွန်အကျွံစုစည်းမှုကိုမယုံသင်္ကာနဲ့အမြဲတမ်းငါကြည့်နေတယ်။
အကယ်၍ ငါတို့ရှိသမျှသည် XMPP ကိုအသုံးပြုပါကဆက်သွယ်ရေးအတွက်အတားအဆီးအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်၊ သင်၌အကောင့်မရှိလျှင်အရေးမကြီးပါ Google, Microsoft က, Facebook က, Whatsapp, ကွေးနနျးစာ, WeChat, လိုင်း နှင့်ရှည်လျားသော etcetera, ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးငါ၏အရှုထောင့်ကနေ, အရာအားလုံးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုလုံခြုံလိမ့်မယ်။
လုံခြုံရေးအကြောင်းပြောရင်၊ စာဝှက်စနစ်ဟာသီးခြားအကြောင်းအရာတခု (အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္) တခု) ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ OTR ကို Pidgin နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
တကယ်တော့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုရှေ့တန်းတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတိုင်းကိုဒီ From Linux community မှကြိုဆိုပါတယ်။ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ » XMPP: ပွင့်လင်းပြီး universal ဆက်သွယ်မှု
လုံးဝသဘောတူသည်မှာသင်စာရင်းကိုင်ဌာန၊ သင်၏ဝမ်းကွဲသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အား WhatsApp သို့မဟုတ် Line အစားအိုလံပစ်အားဖြင့်သင်မှဖြတ်သန်းသွားသောနောက်ဆုံးအဆုံးတွင်အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားသောအခါပြtheနာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့မြည်းကိုမလွှတ်နိုင်လို့သူတို့ကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Juan Perez Perez ဟုသူကပြောသည်
Ritman, ကျနော်တို့ကအသိအမြင်မြှင့်တင်ရမယ်ဘယ်မှာဤသည်အတိအကျဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စကားစမြည်ပြောရာ၌ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုသူတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီး xmpp အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းပထမခြေလှမ်းတက်သောအခါမိုင်တစ်ထောင်ခရီးတစ်ခုစတင်မည်။
ကျွန်ုပ်တွင် XMPP / Jabber အဆက်အသွယ် ၃၀ ကျော်ရှိပြီး၎င်းသည်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်
juan perez perez အားပြန်ပြောပါ
ငါ jabber.org ကိုသုံးရန် Pidgin ကိုသုံးပြီးဝဗ်ပေါ်တွင် mijabber.es နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ ဝက် (ဘ်) mode ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်ဒီဇိုင်းသည်အလွန်လှသည်။ ]
Alberto Aru ဟုသူကပြောသည်
လူဘယ်လောက်ကောင်းလဲ !! diaspora *, Pump, N-1 နှင့် XMPP ၏ကျန်ကွန်ယက်များတွင်ကျွန်ုပ်သည် XMPP ကိုမြှင့်တင်ပေးနေသည်။ အမှန်မှာ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် lignux တွင် post တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။
Alberto Arua အားပြန်ကြားပါ
ငါကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ပါ။ သူတို့အဲဒီမှာမျှဝေထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတကယ်ဖတ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကဒီကိုရေးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ငါအရေးကြီးသည်မှာလူများနိုင်သမျှများများထံရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်၊ ထိုသူများသည် GNU / Linux ကိုသုံးပြီးအခမဲ့နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောဆော့ဝဲလ်၏အရေးကြီးမှုကိုသတိပြုမိလျှင်ပိုကောင်းလိမ့်မည်ထင်သည်။
XMPP နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က WhatsApp ပုံတူမျိုးပွားမှုကိုမတီထွင်ခဲ့သည့်အတွက် ၀ မ်းနည်းမိသည်။ အဲဒါကလူတွေကိုဒါကိုလုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ Telegram လို့ခေါ်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပရိုဂရမ်အသစ်က XMPP နဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင် protocol ကိုသုံးတာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ပျက်မိတယ်။
ငါ Jabber အသုံးပြုသူနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပြီ ပြီးတော့ Android ဖုန်းတွေအားလုံးမှာ Gtalk စီးရီးတွေရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအထီးကျန်မထားပါဘူး။ ယခု မှစ၍ အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကြည့်ရှု။ ၊
ကျွန်ုပ်သည် WhatsApp ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုသည့် XMPP နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောမည်သည့်ပရိုဂရမ်မျှမတွေ့သေးကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံရမည်။ အဘယ်သူမျှမကသင်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ။ စကားပြောဆိုမှုမှပူးတွဲခွင့်ပြုသည်။ အဆက်အသွယ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများဖလှယ်နိုင်ရန်အတွက်စကားပြောခန်းတစ်ခုရှိခြင်းအကြောင်းပြောဆိုကြစို့။ ဒါကြောင့်ယခုငါ XMPP ကိုမည်မျှပင်ထောက်ခံပါစေအခြားသူများကိုအသုံးပြုရန်စည်းရုံးရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး က XMPP ပေါ်တွင် WhatsApp ပုံတူပွားခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ တကယ်တော့အခုပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ကိုယ်ပွားရှိနေပြီဆိုပါစို့၊ ကျွန်တော်အဆိုပြုထားသည့်အရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်ကြိုးစားရန်ထိုရင်းမြစ်ကုဒ်၏အားသာချက်ကိုယူရန်မလွယ်ကူပါ။ အနည်းဆုံးအသုံးပြုသူ interface ကိုကုဒ်။
သင်ပြောသည့်အရာကို၎င်းကို kontalk ဟုခေါ်သည်။
Firefox OS တွင်သင့်တွင် Loqui ရှိသည်
Kontalk သည် Android အသုံးပြုသူများအတွက် ဦး စားပေး IM စနစ်တစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် WhatsApp ကိုမသုံးချင်ဘူး။
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းစွာမမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသည့်အရာမှ၎င်းတို့သည် XMPP သို့ပြောင်းရန်အစီအစဉ်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်လက်ရှိပုဂ္ဂလိက protocol ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းသတ်မှတ်သူအဖြစ်သုံးတယ်။ သုံးစွဲသူအမည်အသစ်ကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစရာမလိုဘဲအကောင့်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်သူများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် XMPP အကောင့်ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါ။
Hyper လက်တွေ့မေးခွန်း။ android အတွက် XMPP client မှ WhatsApp သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်ဒီ post ကို "XMPP / Jabber ကိုသုံး" ရုံပဲပြောရမလား။
PS: ဤတရားမဝင်ပလပ်အင်ဖြင့် pidgin မှဖြစ်နိုင်လျှင်
သူ့ဟာသူပြုလုပ်နိုင်သည်။ Pidgin တွင်လုပ်ခဲ့သမျှသည် Koontalk နှင့် / သို့မဟုတ် Telegram နှင့် voila တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များ၊ မျှဝေလိုသူများ၏လိပ်စာများကို upload တင်လိုသည်။ 😉
Chatsecure မှာဖိုင်မျှဝေမှုအမြဲရှိပြီးချောချောမွေ့မွေ့မသွားဘူး။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်သင်သည် OTR, encryption ကိုသက်ဝင်ရပါလိမ့်မည်။ အခြားပါတီသည်ထို encryption အမျိုးအစားနှင့်လိုက်ဖက်သော client ကိုအသုံးပြုရမည်။ ၎င်းတွင် emojis ထည့်ရန် package (apk) လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကိုအသုံးမပြုနိုင်သော်လည်းအချို့သော connection / disconnection failure ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုပြုပြင်ရန်လိုသေးသော်လည်းအချိန်နှင့်အမျှ beta များရရှိနေကြသည်။ ၎င်းကိုဂါးဒီးယန်းပရောဂျက်မှလူများကစီစဉ်ထားသည်၊ orbot ပြုလုပ်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။
ပြီးတော့မင်းရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပေါင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ၀ င်ရောက်ကျူးကျော်မှုမရှိခြင်း (သို့) သီးသန့်တည်ရှိမှုမရှိခြင်းတို့သာသင်ဖြည့်ထားသောလူများနှင့်သာဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ် pidgin ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်ကိုအွန်လိုင်းမှမည်သူမြင်သည်၊ မည်သူကိုမမြင်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ် PC တွင်ရှိနေစဉ်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။
စကားမစပ်ကျွန်တော့်သိတဲ့အတိုင်း whassap က XMPP protocol ကိုမလွတ်လပ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ အချို့သော extension များဖြင့်သူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထည့်ရန်။ သော့ခတ်, သော့ခတ်။ ကောင်းပြီ
သင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်လိုပါကကျွန်ုပ်၏အကောင့်မှာ mauriciogomez [at] cryptolab [dot] net ဖြစ်သည်။
XMPP သည်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခါကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော protocol ဖြစ်သည် .. ..unt GTalk သည် Hangout ဖြစ်လာပြီး XMPP မှအခြား protocol သို့ပြောင်းလဲမှုသည် .. ၎င်းသည် GMail နှင့် XMPP အသုံးပြုသူများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။
android အတွက်ငါ Xabber ကိုသုံးတယ်၊ ကျနော့်အမြင်မှာကျွန်တော့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ XMPP client ကို။
အလွန်ကောင်းပေမယ့် ... သူတို့ဘာကြောင့် XMPP ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမပေးကြဘူး၊ ငါတကယ်ကောင်းကောင်းမရဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် Pidgin နှင့်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အနည်းငယ်ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကသင်ရွေးချယ်လိုက်သော server ပေါ် မူတည်၍ connection parameters များပြောင်းလဲသွားသည်။ ports များသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း Pidgin တွင်သင်ရေးရန် server ၏အမည်သည်သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆာဗာအားလုံးတွင်သင်၏ messaging client ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်ဟူသောညွှန်ကြားချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါဆောင်းပါးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆာဗာပေါ်မှာသင်မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်ဝက်ဘ်အင်တာဖေ့စ်ကိုမှီခိုခြင်းမရှိစေရန် Pidgin (သို့) အခြားပရိုဂရမ်တခုခုကိုဘယ်လို configure လုပ်ရမယ်ဆိုတာတကယ်တော့အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။
Amarok မမျှော်လင့်ဘဲထွက်ပေါက်? ယာယီဖြေရှင်းချက်